I-Highlanders leCaps United Aphuma Kumncintiswano weChibuku
Ahle aphelelwa ngumphako amaqembu athi ele Highlanders kanye lele Caps United ekuqaleni kwemidlalo eyenkezo ye Chibuku Super Cup.
Amaqembu adlulele kusigaba se quarter - final kumncintiswano wenkezo ye Chibuku Super Cup ngathi ele Triangle, ele Dynamos, ele FC Platinum, ele Chapungu, ele How Mine, ele Harare City, ele Chicken Inn kanye lele ZPC Kariba.
Phakathi kwalawa maqembu iqembu elihlezi kungxenye yangaphansi engalaneni yemiklomelo ngele ZPC Kariba lona elikhulele ele Caps United 4-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa.
Iqembu le Highlanders lalo likhutshwe ngemva kokutshaywa kwembekwa lakhulelwa 4 - 3 ngele How Mine kuthi amanye amaqembu ehlukaniswe ngemva kokutshaywa kwembekwa ngathi ele Triangle lele Tsholotsho lapho ele Triangle elinqobe khona nge 3 ka nya.
Iqembu elizaphakamisa inkezo yalonyaka eye Chibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola asemelika kuthi lelo elizanqotshwa ku final yona ezakuba khona ekupheleni kwenyanga ezayo lizathola inkulungwane ezingamatshumi amahlanu.
Amaqembu aphume kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu kuthi lawo azadliwa kusigaba esilandelayo ese quarter-final azathola inkulungwane ezingamatshumi amabili.
Lawo maqembu azaphelela kusigaba se semi-final azanikwa inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu imidlalo yeligi iqalile elizweni lase Ngilandi laselizweni le South Africa ngempelaviki edluleyo.
Kwele Ngilandi iqembu le Leicester yilo eliphezu kwengalane kuthi kwele South Africa iqembu le Polokwane City yilo elihlezi phezulu.
Sikhangele Sikhangele umdlalo kakhilikithi;
Iqembu elimela ilizwe le Zimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngele New Zealand ngama runs angamatshumi ayithoba minwe mbili emdlalweni wohlobo lwe Twenty20 obungowokucina kumidlalo ebiphakathi kwalawamaqembu ebikhona ensukwini ezedluleyo esigodlweni iHarare.
Phambilini komdlalo we Twenty20 lawa maqembu adlale imidlalo emithathu eyohlobo lwe One Day International yona ephele iqembu le New Zealand linqobe kwemibili kuthi ele Zimbabwe linqobe kowodwa.